Sidee Ayaad U Maareyn Kartaa Wakhtigaaga, Hadiise Aad Ka Adkaatid Maxaad Hagaajin Kartaa.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: April 15, 2016, 12:06 pm
Adiga weeyaan qofka aan la hadlyaa, Haa adigaagan akhriyaya qoraalkan, wakhtigu waa muhiim, waa hantida aad haysato wax yaalaha ugu qaalisan haddii aad si wanaagsan uga faa,iideysato, marna waa wax agtaada yaala waxa ugu qiimaha daran marka aad si khaldan u adeegsato .
Maahmaah qalaad ayaa tiraahda wakhtiga iyo mawjaduba cidna masugaan, halka ay mid kalena odhan jirtey wakhtigu waa seef haddii aanad jarina isaga ayaa ku jara, murti soomaliyeed waxey tidhaahdaa Wakhtigu waa hilaac ordayee.
Wakhtiga ha dhayalsan Aakhiro iyo aduunba waa su,aalaha aan kaa hadheynin, Illahey (SWT) in badan ayuu quraanka ku sheegay muhimada wakhtiga, waliba wuu ku dhaartey “Suratul Casr” iyo meelo kale oo badanba wakhtigu wuu kusoo arooray, mida kale waxa aynu cindiga ku haynaa in su,aalaha qiyaamaha lays waydiinayo ayku jirto wakhtigaagii waxaad ku bixisay, waliba dhalinyarnimadana gaar ayaa laguu sii waydiinayaa.
Wakhtiga Taajir iyo Faqiirba waa laga siman yahey, waa deeq si isku mida loo helo, tuugna aanu kaa xadi karin, lakiin lagu kala tagey ka faa,iideysigeeda,
Haddaba aduu bal miisaanka isa saar ma waxa aad ka mid tahey kuwa wakhtigooda qosol iyo sheeko ay maqaaxiyaha afka kala hayaan ku lumiya ee waliba yidhaahda wakhtiga ayaa isku dhaafinayaa, iyagoo aan dhaadaneyn cawaaqib xumada ay iftiinkooda iyo aakhiradoodaba ku leedahay.
Mise waxa aad dhinac ka raacdey kuwa wakhtiga ka adkaadey ee ay daqiiqad kasta iyo il-bidhiqsi kastaa qiimo ugu fadhiyo.
Haddaba wakhtigaaga sideed uga faa,iideysan kartaa?
1. Sameyso Qorshe Maalinle ah: inaad sameysato qorshe maalinle ah waxey kaa caawineysaa inaad sameysato xariijin aad gaadho, sidaa awgeed waxa meesha ka baxaya wakhtigii kaa dayacmi lahaa.
2. Ku xisaabtan wakhtiyada kama danbeysta ah ee hawl lagaa rabo (Dead lines): waxey kuu sahleysaa inaad qorshe kugu haboon diyaarsato
3. M da cusko “baro inaad tidhaahdid MAYA”: Nina tamartii kama badsho waxaanad awoodin waa inaad maya kaga jawaabta amaba aad u qoondaysaa wakhti kale.
4. Ku dadaal inaad hore isaga qabatid hawlaha kuu yaala: waxaad maanta qaban kartid bari haw dhigan adoo isleh wali wakhtibaa kuu hadhay, isku day inaa mar walba ka hor martid wakhtiga kama danbeysta, dhici kartaa haddii aad ku xisaabtantid wakhtiga lagaa rabo inaad ka dib dhacdo
5. Ka fiirso: ka fiirso haddii ay jirto hawlo badan oo kuu yaala mid walba inaad dhex kaga tagtid ma qumana waa inaad marba mid wakhti fiican siisa si ay kaaga kala fududaadaan oo aanad ugu danbeyn khasaare.
6. Ka hor tag wax kasta oo wakhtiga kaa ridaya: sheekada bilaa dulucda ah, iyo shaaha iska cab uun ah iyo waxkastoo wakhtigaaga cadow ku ah waa inaad ka